उम्मेद्वार - मो रजी हैदर
मो रजी हैदर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) महोत्तरी ४
महोत्तरी क्षेत्र नम्बर ४ मो. रजीद हैदरको जन्म २०१७ सालमा बैरगनिया लक्ष्मिनिया, महोत्तरीमा भएको हो । उहाँका बुवाको नाम शेख हासिन र आमाको नाम अन्जुम आरा हो । एकीकृत नेकपा माओवादीबाट उम्मेदवार बनेका हैदरको राजनीतिक पृष्ठभूमि नेपाली कांग्रेस हो । उहाँ वि.सं. २०३६ सालदेखि नेपाली कांग्रेसमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो । तर उम्मेदवारी दिनु अघिल्लो दिन उहाँ नेपाली कांग्रेस परित्याग गरी एकिकृत नेकपा माओवादीमा प्रवेश गर्नुभएको हो । उहाँ माओवादीको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ । २०७० सालको चुनावमा उहाँ महोत्तरीबाट पराजित हुनभएको थियो । भारतबाट गणित विषयमा स्नातकोत्तर र त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातक गरेका हैदर लामो समय शिक्षण पेशामा संलग्न हुनुभएको थियो ।
सिन्धुपाल्चोक २ पूरा विवरण